मनिकर कार्की, प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार, रुपन्देही क्षेत्र नं. २, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
कुनै समय वित्तीय संस्थाको जागिर, पत्रकारिता, लेखन, प्राध्यापन हुँदै फेरि लघुवित्त बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका ३२ वर्षीय युवा हुन् मनिकर कार्की । हाल सबै पेशागत जिम्मेवारी छाडेर सक्रिय राजनीतिमा होमिएका उनी अहिले रुपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । पेशागत जीवनबाट राजनीतिमा होमिएका उनै कार्कीसँगको कुराकानी ।
तपाईंको राजनीतिक यात्रा केका लागि हो ?
म विगत एक दसकदेखि नै सक्रिय रुपले लेखनमा संलग्न छु । साथै मैले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी पनि राम्रैसँग निभाएको थिएँ । मैले आफ्ना लेखहरुमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिंदै यो देशको विकास र समृद्धिका बारेमा कलम चलाएँ । तर, लेखेर मात्रै समाज बदल्न नसकिने रहेछ । समाज बदल्नको लागि त राजनीति नै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र रहेछ भन्ने लागेर म राजनीतिमा लागेको हुँ ।
फेरि हाम्रो राजनीति अहिले निकै अपारदर्शी एवं भ्रष्टिकृत हुँदै गएको छ । यसलाई पनि बदल्नु छ । अनि बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै बदलिएको विकास, समृद्धि र प्रगतिको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि नयाँ पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय हुनु पर्छ नै भन्ने लागेर म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ । भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको राजनीतिलाई उतार्नकै लागि हामी युवा अब राजनीतिक विकल्प बनेर अघि बढ्नुपर्छ । यही दृष्टिकोण र आत्मविश्वास बोकेर म सक्रिय राजनीतिमा लागेको हुँ ।
अहिले राजनीतिबाट सबै दिक्क भएका छन् । खासगरी अहिलेको युवापुस्ता त झनै राजनीतिको नाम नै सुन्न चाहँदैन । तपाईं चाहिं सबै छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएको छ, किन ?
हाम्रो समाजमा एउटा कथन नै छ नि, पहिलो सिटमा बस्ने (फस्र्ट बेन्चर्स) डाक्टर इन्जिनियर अनि पछिल्लो सिटमा बस्ने (लास्ट बेन्चर्स) नेता । मलाई लाग्छ अब त्यो पुरानो मान्यता बदल्ने बेला भएको छ । अहिले यो देशमा राजनीतिक कार्यभार बदलिएको छ । अब बदलिएको कार्यभार पुरा गर्नका लागि युवा पुस्ता अग्रसर हुनैपर्छ । त्यो चाहे व्यवसायिक, पेशागत वा राजनीतिमै किन नहोस् । यहि ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि अबको पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । किनकि यो पुस्तामा कुनै लोभ हुँदैन र छैन । कुनै आर्थिक अपारदर्शिता हुँदैन र छैन । राजनीतिबाट व्यक्तिगत लाभ लिने आकांक्षा हुँदैन र छैन । यदि छ त केवल यहाँ भइरहेको बेथिती र अनियमितता अन्त्य गर्ने चाहना । यदि छ त केवल यहाँको अव्यवस्था अन्त्य गर्ने र देशलाई समृद्ध तुल्याउने हुटहुटी । यसैका लागि युवा आफैं राजनीतिमा विकल्प बनेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । मेरो राजनीतिक यात्राको उद्देश्य पनि यहि नै हो ।
तपाईंले असल राजनीतिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको भन्नुभएको छ, राजनीति किन बिग्रियो ?
हाम्रो पारम्परिक राजनीतिले कार्यकर्ता र समर्थक मात्रै उत्पादन गर्यो । अब त्यसो होइन, राजनीतिले एक सचेत र आलोचनात्मक चेत भएको नागरिक जन्माउनुपर्छ । म यहि ध्येयका साथ राजनीतिमा लागेको हुँ । मेरो राजनीतिक अभिष्ट आफू नेता हुने अनि अरुलाई कार्यकर्ता वा फलोअर बनाउने होइन, म आफू नागरिकको अवस्था फेर्ने अभियानमा सक्रिय एक अभियन्ता हुँ र म यो देशमा सचेत नागरिक बनाउने अभियानमा लाग्नेछु ।
अर्को कुरा यहाँ राजनीति व्यवसायिकृत भइसकेको छ । यहि चुनावमा ठूला पार्टीहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा बाहिर आएको आर्थिक चलखेललाई मात्र हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक अब व्यवसायिकृत भइसकेको निश्कर्ष निस्कन्छ । जब राजनीति व्यवसायिकृत हुन्छ, त्यसले भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्छ र अन्ततः त्यो अपराधिकरणतर्फ अग्रसर हुन्छ । यहिँनेर बिग्रिएको हो हाम्रो राजनीति । अब यसलाई बदलेर असल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । मेरो राजनीतिक अभियान यो पनि हो ।
तपाईं खासमा किन उम्मेदवार बन्नुभएको हो ? युवाको प्रतिनिधि बन्न कि कुनै पद र शक्ति आर्जन गर्नका लागि हो ?
हेर्नुस् मेरो राजनीतिक यात्रामा कुनै पद, आर्थिक लाभ या शक्तिको आशक्ति छैन । तपाईंलाई थाहा छ, म पेशागत रुपमा पनि राम्रै हैसियत बनाएर बसेको मान्छे हुँ । प्राध्यापन, मिडिया व्यवस्थापनहुँदै लघुवित्त बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि काम गरिसकेको छु । त्यसैले मलाई कुनै लाभ या शक्तिको आशक्ति छैन । हो, म अहिले राजनीतिमा लागेको छु । राजनीतिमा सक्रिय हुँदैगर्दा प्राप्त हुने पद या शक्तिलाई भने मैले मेरो घोषित राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि उपयोग गर्नेछु । मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गरेको होइन, म गर्दिन । यो देशमा परिवर्तनको खाँचो छ, त्यो परिवर्तनका लागि युवा पुस्ता सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने महशुस गरेरै म राजनीतिमा लागेको हुँ । त्यसैले मेरो राजनीतिक यात्रा समाज बदल्ने, यहाँको गरिबी अनि बेरोजगारीको अवस्था बदल्ने, सामान्य रोजीरोटीको लागि विदेशिन बाध्य युवा पुस्तालाई स्वदेशमै आफ्नो घरपरिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउने र आम नागरिकको अवस्था र दैनिकी फेर्ने नै मेरो घोषित राजनीतिक लक्ष्य हो ।
मतदातालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?
म आम नागरिकको घरदैलोमा पुगेर मत माग्दै गर्दा निकै उत्साहित भएको छु र रमाइलो पनि लागिरहेको छ । हामीले अब युवापुस्ताले राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ । म परिवर्तन, विकास, समृद्धि र प्रगतिको मुद्दाहरु लिएर चुनावी अभियानमा छु र नागरिकबाट पनि हाम्रा मुद्दाहरुलाई सहर्ष स्वीकार गरिएको छ । उहाँहरुमा देश परिवर्तन भएन, बेरोजगारीको अन्त्य भएन, दुःख बदलिन सकेन भन्ने गुनासो छ । हामी त्यही अवस्था बदल्ने अभियानमा छौं । अबको राजनीतिक कार्यभार युवापुस्ताले बदल्ने हो, हामी त्यही अभियानमा छौं । त्यसैले समग्र युवापंक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै म चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु । मलाई साँच्चिकै रमाइलो अनि उत्साहित अनुभव गरिरहेको छु ।
हामी मतदाताको प्रतिक्रियाले उत्साहित पनि छौं । अहिले आम नागरिक प्रश्न गर्न थालेका छन् । विगतमा दल र तिनका नेताहरुले बाँडेका आश्वासनको बारेमा प्रश्न गर्छन् । ती सपना किन पूरा हुन सकेनन् भनेर प्रश्न गर्छन् । हामी त्यसैको उत्तर दिँदै पारम्परिक राजनीतिको चरित्रको बारेमा मतदातालाई सम्झाउँदैछौं । अनि वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा जानकारी दिंदै अबको राजनीतिक गन्तव्यको बारेमा बहस गर्दै हिंडेका छौं । यसमा आम नागरिकको अभिमत परिवर्तन, विकास र समृद्धिकै दिशातर्फ छ । आम नागरिक आफ्नो अवस्था बदलिएको हेर्न चाहन्छन् । यो देश समृद्ध बनेको देख्न चाहन्छन् । आफ्ना समस्या र दुःख हटेको हेर्न आतुर छन् ।
तपाईं ठूला पार्टीका ठूलो पोर्टफोलियो भएका उम्मेदवारहरुसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, तपाईंको चुनाव जित्ने आधार के हो ?
एउटा कुरा म के स्वीकार गर्छु भने पुराना शक्तिहरु अनि तिनका नेतृत्व तपाईंले भनेजस्तो चर्चित उम्मेदवारहरुको योगदान राजनीतिक व्यवस्था फेर्नका लागि भयो । त्यसका लागि उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद छ । तर, अहिले व्यवस्था फेरिएसँगै राजनीतिको एजेण्डा फेरिएको छ । अब आम नागरिकको अवस्था फेर्ने बेला आएको छ । गरिबीको अवस्था, भ्रष्टाचारको अवस्था, बेरोजगारीको अवस्था फेर्ने बेला हो यो ।
त्यसैले हामी यो बदलिएको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि दलको शैली, संस्कार अनि चिन्तन प्रणाली नै फेरिनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसैले त वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महशुस भएको हो । अब हिजो जसरी राजनीति गरियो, त्यही तौरतरिका अनि शैली र विचारले राजनीति चल्दैन । अब परिवर्तन हुने बेला आइसकेको छ । हिजोको राजनीतिक साधन अनि साध्य बदलिएको छ । त्यसैले अब नयाँलाई चुन्नुपर्छ । म आम नागरिकलाई पनि त्यही अपिल गर्न चाहन्छु । हामी युवा उहाँहरुको प्रतिस्पर्धी होइन, विकल्प हौं । हामी राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छौं, राजनीतिको चरित्र बदल्न आएका छौं । म त भन्छु अब राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, यसमा उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
आम मतदातासमक्ष तपाईंका केही प्रतिबद्धता छन् कि ?
मेरो राजनीतिक लक्ष्य भनेकै आम नागरिकको अवस्था फेर्ने हो । आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगति मार्फत आम नागरिकको मुहारमा मुस्कान भर्ने नै मेरो प्रमुख लक्ष्य हो । त्यसले म त्यही लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता आम मतदातासमक्ष जाहेर गर्दछु । म अरु पार्टीका उम्मेदवारहरुले जस्तो यो पनि बनाउँछु, त्यो पनि बनाउँछु भन्दिन । किनकि त्यो नियमित कार्यसूचिमा आउने कुरा हो । यहाँ सरकारको नियमित योजनालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेर मत माग्ने परिपाटी छ, जुन सिद्धान्ततः गलत हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।